निधार हेरेर नै थाहा पाउन सकिन्छ मानिसको स्वभाव जिद्दी छ कि बुद्धिमान छ भनेर ! – Online Khabar 24
निधार हेरेर नै थाहा पाउन सकिन्छ मानिसको स्वभाव जिद्दी छ कि बुद्धिमान छ भनेर !
धेरै ज्योतिषीहरूले निधार हेरेकै भरमा मान्छेको भविष्यवाणी र अनेकौं रहस्य बताइदिन सक्छन् । यसमा कुनै चमत्कार छैन ।
तपाईं पनि यो कुरा जान्न सक्नुहुन्छ । समुद्रशास्त्र पढ्नुभयो भने हरेक व्यक्तिको निधारमा उसको जीवनसँग जोडिएको कुरा लेखिएको थाहा लाग्छ । ल, हेरौं न त तपाईंको निधारमा के लेखिएको छ ।
समुद्रशास्त्र भगवान् शिवका छोरा कार्तिकेयले लेख्नुभएको हो । यस शास्त्रका अनुसार निधारका रेखा र बनावट हेरेर को ज्ञानी हुन्छ, को धनी हुन्छ र कसलाई आर्थिक समस्या पर्छ सबै थाहा हुन्छ । निधार ठूलो हुने मान्छे बुद्धिमान् हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिलाई धेरै विषयको जानकारी हुन्छ ।
अगाडिपट्टि चुच्चो परेको निधार भएको व्यक्ति लोभी हुन्छ । भनाइको मतलब यस्तो व्यक्तिलाई धन बटुल्न खुबै मन लाग्छ। अर्काको धनसम्पत्ति देखेर यस्ता व्यक्तिले खुब डाहा गर्छन् । चम्किलो र चिल्लो निधार भएको व्यक्ति प्रतिभाशाली र गुणवान हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा र ज्ञानबाटै धनसम्पत्ति कमाउँछन् । यस्तै यो पनि पढनुस दाहिने गालामा कोठी हुनेको भाग्य हुन्छ, आँशु झर्ने ठाउँमा कोठी हुने भाग्यमानी हुँदैनन् भन्ने धारणा हाम्रो समाजमा प्रसस्त्रै पाइन्छ ।
यस्ता धारणाको वैज्ञानिक पुष्टी त अहिलेसम्म भएको छैन तरपनि जनसाधारण मात्र नभएर ज्योतिषीहरुले समेत कालो कोठीको खास महत्व हुने बताउँछन् ।यस्तो कोठी शरीरको कुन भागमा छ त्यसले सोही अनुसारको शुभाशुभ फल दिने मत ज्योतिषीहरुको छ । कोठीले दिने फलको रोचक तथ्य यस्तो छ ।
यस्तै भनिन्छ, महिला तथा केटीहरूको जीवनमा थुप्रै रहस्यहरू हुन्छन्। महिलाहरूको जीवनलाई रहस्यको पर्यायवाची पनि भन्ने गरिन्छ । केटीहरूको मनमा के भइरहेको छ, त्यो पढ्न कठिन मात्रै होइन असम्भव नै हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । यसको अर्थ केटीहरूले आफ्नो पुरुष साथीबाट धेरै कुरा लुकाउँछन्।
Prev१८ वर्षीय युवक जो गर्भवती छन, युवक गर्भवती कसरी बने त? यस्तो छ सबैलाई रुवाउने त्यो दुख दायी कथा !
nextम्याकुरीसँग बिहे गरेपछि सुम्निमा खालिङले लेखिन्, ‘मेरो लाइफको सबैभन्दा ठूलो कुरा भेटियो’